Burj Khalifa nwere ngwugwu njem nlegharị anya nke Dubai Mall Aquarium
Dubai mara mmaeze 212022-05-23T17:14:39+05:30
Njem nlegharị anya nke Dubai City
Deira Dool Cruise
Ụlọ Ahịa Aquarium Dubai & Mmiri Mmiri
Ọdọ mmiri Aquaveture
Zute ma kelee ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu mba Dubai.
Ọpụpụ ọdụ ụgbọ elu si na ọdụ ụgbọ elu mba ofesi Dubai gaa na nkwari akụ Dubai na ndabere nkeonwe.
Abalị 04 / 05 ụbọchị na-anọ na Four Star Dubai Hotel gụnyere nri nri nri nri nri.
Ọkara Day Dubai City Tour na oche dị na nchịkwa.
Desert Safari nwere nri abalị BBQ nọ n'oche n'oche nchịkwa.
Nri abalị Deira Dhow Cruise nwere mbufe n'oche onye nchịkwa.
Nleta na The Top - Burj Khalifa (Ndị na-abụghị Prime Hours) na-esote Dubai Mall Aquarium na Underwater Zoo na ntinyeghachi na oche na nchịkwa nchịkwa.
Ịnweta Aquaventure Waterpark na The Lost Chambers Aquarium nwere mbufe nloghachi na oche na ndabere nchịkwa.
Ọdụ ụgbọ elu na -ebupụ site na ụlọ nkwari akụ Dubai gaa n'ọdụ ụgbọ elu mba Dubai na ndabere nkeonwe.
Bata Dubai - Deira Dhow Cruise:
Royal Arabian Onye nnọchi anya ọdụ ụgbọ elu ga-anabata gị na mbata na ọdụ ụgbọ elu International Dubai. Nyefe ọdụ ụgbọ elu nkeonwe gị ga-echere n'ọdụ ụgbọ elu ma ị nwere ike zuru ike n'ụgbọ ala anyị ruo mgbe ị rutere na nkwari akụ. Royal Arabian Ndị otu ga-eme ndokwa tupu ha abanye n'ụlọ nkwari akụ.
Na mgbede jikere ka ị nweta njem nlegharị anya gị na Dubai gaa n'ọkwa ọzọ! Banye ụgbọ mmiri ọdịnala anyị nke na-ese n'elu gị na Dubai Creek akụkọ ihe mere eme n'ụzọ dị nro. Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri anyị dị nkeji iri itoolu gụnyekwara nri nri nri na ihe ntụrụndụ n'ime ụgbọ mmiri. Ịgbadata n'ọdụ ụgbọ mmiri dị jụụ nke Dubai Creek n'ọdụ ụgbọ mmiri Arab ọdịnala anyị, nke nwere nri abalị mara mma gbasapụrụ n'elu ụgbọ mmiri, bụ ahụmịhe dị iche iche nke obodo dị ịtụnanya, ile ọbịa na-enweghị atụ, na ọrụ dị mma.
Otu n'ime isi ihe nkiri nke ezumike Dubai gị, njem nri abalị bụ ụzọ kachasị mma iji nwee ọmarịcha vistas nke Deira na Bur Dubai n'ọgbara dị mma ma na-anabata. Ụgbọ mmiri Dubai Dhow nke ga-ewe awa abụọ nke na-amalitekarị mgbe anyanwụ dara na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Dubai Creek dum. Ozugbo ị banyere n'ụgbọ mmiri anyị e weghachiri eweghachi nke ọma na Dubai Creek, a ga-enye gị ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, ozugbo njem njem ahụ malitere, ị nwere ike iri nri n'ụdị pụrụ iche nke gourmet a kwadebere nke ọma gụnyere efere Emirati mbụ jupụta na ọmarịcha. n'usoro nke desserts.
Ka ị na-ele anya na ọmarịcha echiche nke Creek ebe klaasị nke oge a na-ejikọta aka na aura na ịma mma nke oge ochie, njem ụgbọ mmiri Arabian ụsọ mmiri nke Dubai na-enye gị ahụmịhe nlegharị anya na-adịtụbeghị mbụ ma na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ihe nkiri. ụdịdị dị iche iche nke ọrụ ụgbọ mmiri gụnyere mmemme egwu dị ndụ yana ihe ngosi egwu ọdịnala Tanura. Ọkachamara ọkwọ ụgbọ ala anyị ga-anabata gị ka ahụmịhe Doow ga-ahapụ gị azụ nkwari akụ na mbufe nkekọrịta.
Nọrọ abalị na nkwari akụ.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. Mgbe nri ụtụtụ zuru oke, jikere ka ị nweta ọmarịcha obodo Dubai nke nwere onye maara nke ọma na ahụmahụ. Royal Arabian Nduzi. Onye ndu anyị ga-ahazi ma nabata gị site na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na isi iji chọpụta Dubai. Ọ ga-abụ njem nlegharị anya Dubai nke ọkara ụbọchị na nkekọrịtara ebe ị ga-ahụ saịtị akụkọ ihe mere eme na ndụ dị egwu nke Dubai. Njem a ga-ekpuchi ochie Dubai, Dubai ọhụrụ, akara ngosi na ebe a na-eme ememe.
Dubai nwere ebe nlegharị anya dị egwu na ama ama n'ụwa na ebe mmasị. Ọkachamara ọkachamara na enyi anyị ga -anya ụgbọ ala site na Meena Bazaar, mpaghara Shindagha, Gold souq, Union Flag Pool, ụlọ alakụba Jumeirah, na Project Canal Water Canal. Gaa na Zabeel Obí, nnukwu ụlọ dị na mpaghara Zabeel ebe ị ga -enweta ohere nkwụsị foto iji were selfie were were obí eze. Ụgbọala gafere na mpaghara Jumeirah wee nwee ọ Photoụ Stop Stop na Burj Al Arab dị nso n'akụkụ osimiri Jumeirah wee gafee Jumeirah Beach Hotel, Wild Wadi, Burj Al Arab, Souq Madinat Jumeirah, Al Qasr Madinat Jumeirah, College Dubai, Dubai Tram Line, Dubai Media City, na ọdụ ụgbọ elu Monorail. Nwee ọmarịcha ebe nlegharị anya n'akụkụ mmiri nke Dubai bụ Pointe, na -elele ọmarịcha echiche na ị nwere ike were selfie weghara ebe nchekwa ahụ. Nwee ọmarịcha ịma mma nke Atlantis ma nọrọ oge na Pointe.
Na -aga site na mpaghara Atlantis n'ọbụ aka, Al Barsha, Mall nke Emirates, Dubai Downtown / Business Bay, Dubai Mall / Burj Khalifa / Sheikh Zayed nke nwere ụlọ elu dị n'akụkụ abụọ. Mgbe Ahụmịhe zuru oke, a ga-atụba gị na nnukwu ụlọ ahịa Dubai, ebe a na-erekarị na ebe ntụrụndụ, wee rie nri ehihie gị na nhọrọ ihe karịrị nri na ihe ọ 200ụ beụ XNUMX.
E mesịa gaa na otu n'ime aquarium ndị kasị ibu na kasị maa mma n'ụwa. Echefula nnukwu tank nke dị nde lita 10 na Dubai Aquarium na Underwater Zoo, nke nwere ihe karịrị anụmanụ mmiri 33,000 na nchịkọta anụ ọhịa kacha buru ibu n'ebe ọ bụla.
Na-ebili n'ala nke atọ nke Ụlọ Ahịa Dubai, aquarium bụ ebe obibi nke ụdị ndụ 140 nke oké osimiri ma na-enye ọtụtụ ụzọ dị egwu iji nweta ụwa n'okpuru mmiri. Gagharịa n'ọwara dị mita 48, ebe aquarium na-ekpuchi gị site n'elu na gburugburu. Ọ bụ nlele anya azụ zuru oke, nke nwere agụ aja shark na stingrays na-egwu mmiri n'elu.
Burj Khalifa nke Dubai, nke kachasị ogologo n'ime ụlọ niile dị n'ụwa, toro ogologo na mpako n'etiti ụlọ elu ndị ọzọ nke obodo ahụ. Gaa leta ụlọ a mara mma ka ịmatakwu akụkọ banyere Dubai na akụkọ ihe owuwu ya. Biputere nke a, gaa na oche nche ụlọ nke 124th (N'elu) na igwe mbuli ngwa ngwa ka ị nwee nlele panoramic ogo 360 nke obodo Dubai dum. Ndị ọbịa nwekwara ike ịnụ ụtọ ihe ngosi isi iyi ịgba egwu kachasị n'ụwa nke na-arụ ọrụ n'etiti nkeji 30 ọ bụla n'ala ala ụlọ ahịa Dubai.
Bulite na ịwụpụ ga-abụ na ụgbọ ala nkekọrịta. Nọrọ abalị na nkwari akụ.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. Oge ntụrụndụ maka ịzụ ahịa n'onwe gị. Ndị otu anyị ga-enyere gị aka na nkọwa nke ụlọ ahịa ahịa na nhọrọ ịzụrụ kacha mma dị. Anyị nwekwara ike inyere gị aka nlegharị anya ịzụ ahịa na ọnụ ahịa ọzọ.
N'ehihie, a ga-ebuga gị na nkwari akụ site na 4×4 wheel Drive n'etiti 3.00 PM ruo 3.30 PM maka obi ụtọ nke ịnya ụgbọ ala na dunes. Ị ga-aga n'ọzara ka ị nụ ụtọ nri abalị safari ọzara kacha atọ ụtọ. Ọ bụ ahụmịhe nkekọrịta ebe a ga-ekenye gị oche n'ime ụgbọ ala 4 × 4 nke a ga-ahọpụtara gị na ndị ọbịa ndị ọzọ ga-eso gị kerịta. Desert Safari Dubai bụ ngwakọta nke njem, ntụrụndụ omenala, na nri abalị mara mma n'okpuru kpakpando. Ihe kacha pụta ìhè nke njegharị ahụ bụ ihe na-akpali akpali nke 4 × 4 n'ime ájá ọzara. Ị ga-anụ ụtọ nkwụsị foto ọdịda anyanwụ n'oge ịsa mmiri na-akpali akpali nke ga-esochi nleta na ebe a mara ụlọikwuu Arab anyị iji weghara ezigbo mkpa nke ọzara. Nweta kọfị Arabic, shisha ma nwee ọ enjoyụ dị ka ịgba egwu Tanoora, ịgba egwu afọ na ihe ngosi ọkụ. Ị ga-enwetakwa ohere ịnya kamel, na-eje ije n'elu ájá ọzara, yikwasị uwe Arabic, chọọ aka gị mma n'uche na-afụ atụmatụ henna na-ese foto nke falcon. Iji mee ka uto gị dị ụtọ, safari ọzara Dubai gụnyekwara nri abalị na-atọ ụtọ nke na-egosipụta nri nri anaghị eri anụ na nke anaghị eri anụ. Mgbe nri abalị gasịrị, onye ọkwọ ụgbọ ala anyị nwere ahụmahụ ga-atụba gị azụ na nkwari akụ site na ụgbọ ala 4 × 4. Nọrọ abalị na nkwari akụ.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. N'ụtụtụ, a ga-ebuga gị na nkwari akụ wee gawa Atlantis The Palm, ka ị nweta Aquaventure Waterpark na The Lost Chambers Aquarium.
Aquaventure Waterpark: Aquaventure Waterpark, Ogige mmiri kachasị ukwuu n'ụwa na-ekwe nkwa ụwa nke obi ụtọ ime ka ị nwee mmetụta #DifferentInWater n'ụzọ karịa otu. Nweta asọmpi pulse gị na ihe nkiri slide na ihe nkiri 30, gafere Raging Rapids, wee zuru ike na 1km nke osimiri nkeonwe. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na ime na Aquaventure Waterpark, site na ihe ngosi mmịfe ọhụrụ na ihe nkiri anyị na-atọ ụtọ ruo na anyị na anụmanụ mmiri anyị dị ịtụnanya. Ị gaghị agwụ ike. Aquaventure Waterpark bụ ebe ọmarịcha ịgba ọsọ na ihe nkiri na-emebi ndekọ, dị ka Trident Tower, Shockwave na Blackout. Dị n'akụkụ Atlantis, The Palm, ma nweta ihe kachasị mma na ezumike gị na akara ngosi a hụrụ n'anya. Nnukwu ogige ntụrụndụ ahụ nwere ihe ngosi 79 na-agbago n'elu ụlọ elu atọ, ahụmahụ mmiri na mmiri 26, osimiri nkeonwe, mmiri mmiri dị jụụ na ebe egwuregwu ụmụaka maka afọ niile.
The Lost Chambers Aquarium: Gburugburu onwe gị na ndụ mmiri site na ịgagharị na oghere iko nke The Lost Chambers Aquarium. Na-agba ama shark, stingrays, piranhas, lobsters, na ndị kasị nta nke oké osimiri na Atlantis, The Palm – nanị ụfọdụ n'ime ihe e kere eke ị ga-abịa ihu na-fin na n'ụwa a n'okpuru mmiri. N'ịwepụ Obodo Atlantis furu efu, ọwara mmiri dị n'okpuru na-eje ozi dị ka ahụmahụ na-emikpu n'ime mmepeanya nke ụgbọ mmiri furu efu na mkpọmkpọ ebe. O doro anya na ị ga-ezute nchịkọta ndụ n'okpuru mmiri kachasị ịtụnanya, mara mma n'ime ụlọ iri mara mma. Enwere ihe ngosi ndụ mmiri 10 n'ime aquarium a ebe ị nwere ike imekọrịta ihe na ụfọdụ n'ime ihe ndị e kere eke na ọbụna nyere ha aka ịzụ nri - ndị ọkachamara anụmanụ na-eduzi. Ma ịchọrọ ịhụ ma ọ bụ bụrụ n'ezie akụkụ nke ọnọdụ mmiri dị n'okpuru mmiri, The Lost Chambers Aquarium bụ ihe egwuregwu maka ezinụlọ dum.
Ibulite na mbupụ ga-abụ na usoro mbufe nkekọrịta.
Nwee nri ụtụtụ na nkwari akụ.
Mgbe e mesịrị lelee ma nyefee na ọdụ ụgbọ elu Dubai maka ụgbọ elu ọpụpụ gị. Onye ọkwọ ụgbọ ala anyị ga -erute ụlọ nkwari akụ n'oge maka mbufe ọdụ ụgbọ elu gaa ụgbọ elu gị n'ihu ma ọ bụ azụ ụlọ.
Ọnụahịa zuru ezu nke njegharị
Ụdị ime ụlọ: Ụlọ Deluxe price
Nkwenye: Ruo Septemba 30, 2022
Ịkekọrịta Otu $ 593
Ịkekọrịta ugboro abụọ (ọnụego otu onye) $ 435
Agba okenye ọzọ $ 430
Ịkekọrịta ụmụaka na -enweghị akwa ọzọ $ 325
Nkata ụmụaka na akwa ọzọ $ 422
Aha ụlọ nkwari akụ: Grand Excelsior Hotel Bur Dubai ma ọ bụ ihe yiri ya
Typedị :lọ: Ime ụlọ Deluxe
Dee akwụkwọ njegharị gị
Ụbọchị Njem: Site na*
Ụbọchị Njem: Na*
Ụgbọ elu, Visa.
Atụmatụ na Porterage.
Ụgwọ njem nlegharị anya Dirham.
Nri ọ bụla ọzọ karịa nke akọwapụtara n'elu
Nlegharị anya ọ bụla ọzọ karịa nke a kpọtụrụ aha n'elu
Tiketi mbata na ebe nkiri ndị ọzọ karịa akpọtụrụ n'elu ma ọ bụ njegharị nhọrọ ma ọ bụ ebe ọ bụla akọwapụtara
Ọrụ ọ bụla akpọghị aha na listi nsonye.
Ọnụ ego ngwugwu niile dị n'elu na -ehota na dollar US n'otu n'otu yana ọ dị irè na ụbọchị akpọtụrụ aha.
Ọnụ ego ndị dị n'elu nwere ike gbanwee n'ihi ọnụego nkwekọrịta/ mwepu ọnụego nkwalite site na nkwari akụ ma ọ bụ mgbanwe ego ma ọ bụ ụtụ isi ọ bụla, ọrụ, ọnụ ụzọ okporo ụzọ gọọmentị na -eme n'amaghị ọkwa.
Ulo maka nwata dị ka ekwuru na amụma ụmụaka nke ụlọ oriri n'otu n'otu. Nwata nọ n'okpuru afọ 02 ka a na -ewere dị ka nwa ọhụrụ na afọ 02 ruo afọ 12 ka a na -ewere dị ka nwata.
N'elu ngwugwu na ọnụ ụlọ dị n'okpuru nnweta, jiri obiọma kwenye ndị otu anyị tupu ị gosi onye ahịa gị.
Ụgwọ kagbuo ga -adabara dị ka amụma ụlọ nkwari akụ ọ bụla na kagbuo 100% ga -adị ma ọ bụrụ na akagbuo ya n'ime oge ịkagbu.
Ọrụ niile agụnyere na ngwugwu bụ ihe mmanye na agaghị akwụghachi ma ọ bụrụ na ewereghị ọrụ ọ bụla. Ọnụ ego ngwugwu dị irè maka opekata mpe 2 na -eme njem ọnụ.
Ọnụahịa ngwugwu anaghị arụ ọrụ n'oge nnukwu ihe ngosi, ihe omume, ekeresimesi, oge afọ ọhụrụ na oge gbochiri ga -adụ ọdụ n'oge ntinye akwụkwọ.
Dirham njem nlegharị anya nke ụlọ oriri na nkwari akụ dị na Dubai kwụrụ, otu onye ọbịa n'ụlọ nkwari akụ ahụ ga -akwụrịrị ya ụgwọ.